ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တောင်းရမ်းစားသောက်မှုကြောင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် မြန်မာအမျိုးသမီး၏ ကလေးငယ် ၂ ဦးအား ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေးအပ် - Kanbawza Tai News
Home တာချီလိတ် ရှမ်းရှေ့သတင်းများ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တောင်းရမ်းစားသောက်မှုကြောင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် မြန်မာအမျိုးသမီး၏ ကလေးငယ် ၂ ဦးအား ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေးအပ်
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တောင်းရမ်းစားသောက်မှုကြောင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် မြန်မာအမျိုးသမီး၏ ကလေးငယ် ၂ ဦးအား ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေးအပ်
November 06, 2020 တာချီလိတ်, ရှမ်းရှေ့သတင်းများ,
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့တွင် တောင်းရမ်းစားသောက်မှုကြောင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ကလေးငယ် ၂ ဦးအား ယနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်က တာချီလိတ်မြို့ရှိ မြန်မာ-ထိုင်း အမှတ် (၂) ချစ်ကြည်ရေးတံတားတွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာဘက်သို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ လွှဲပြောင်း/လက်ခံဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မယ်ဆိုင်မြို့၊ BCATIP ရုံးမှ Pol. Capt. Pantep Taweeko နှင့် အဖွဲ့က လာရောက်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရာ တာချီလိတ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးချမ်းမြေ့စောနှင့် တာဝန်ရှိသူများက လက်ခံဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အသက် ၁၄ နှစ်နှင့် အသက် ၄ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ် ၂ ဦးသည် ၎င်းတို့၏မိခင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့ တွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်စဉ် အတူပါသွားခဲ့ပြီးနောက် မိခင်ဖြစ်သူမှ စီးပွားရေး အဆင်မပြေသဖြင့် တောင်းရမ်း စားသောက်စဉ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်က ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုပြီး မိခင်အား ဒဏ်ငွေ ဘတ် ၄ သိန်း ပေးဆောင်ရန် အမိန့်ချမှတ်ကာ ချင်းမိုင်ရဲစခန်းတွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားကြောင်း သိရသည်။
သို့ဖြစ်၍ ကလေးငယ် ၂ ဦးအား ထိုင်းနိုင်ငံ၊ လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် လူထုလုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ လူကုန်ကူးခံရသူများ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာတွင် ခေတ္တထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားပြီး ယနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်း ပေးအပ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်း လွှဲပြောင်းပေးအပ်လာသည့် ကလေးငယ် ၂ ဦးအား တာချီလိတ်မြို့၊ ဆန်ဆိုင်း (ခ) ရပ်ကွက်ရှိ မိုးကုတ် ဝိပဿနာ Quarantine Center တွင် ၁၄ ရက်ကြာ အသွားအလာ ကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ထားရှိသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၁၄ ရက်ပြည့်ပါက တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ ဝမ်လုံးအုပ်စု၊ လွယ်စတုံအောက်ကျေးရွာနေ ၎င်းတို့၏ ဖခင်ထံ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။